Kubudirira: mutambo wevhidhiyo une kusunungurwa kutsva uye nhau | Linux Vakapindwa muropa
Kubudirira Icho chaicho chechokwadi vhidhiyo mutambo zita iro ikozvino rave nekubuditswa nyowani. Zvirokwazvo zvinokuyeuchidza iwe muchikamu cheSpore, zita rakakurumbira mune iro hupenyu nekushanduka kwemarudzi kunoenzaniswa kubva kumatanho epakutanga kusvika kukoloni yemapoka enyeredzi.
Zvakanaka, Kubudirira kwakafanana chaizvo, asi iri mhando yekushanduka simulator yemahara uye yakavhurwa sosi. Iyo ine rutsigiro rwekugoverwa kweGNU / Linux, iri nhau huru kune vashandisi veLinux avo vagara vaida kutamba chimwe chinhu chakafanana neSpore (inowanikwa yeWindows, macOS, iOS, Android, uye Nintendo DS) asi kubva papuratifomu yepenguin.
Nekusvika kwa Kubudirira 0.5.5 Yakagadzirisa zvakanyanya maitiro ayo aimbove nawo, pamusoro pekugadzirisa madhigi makuru akange aripo mushanduro dzakapfuura. Izvi zvinoreva kuti hakuzove neakakura maficha, mashandiro kana zvemukati zvitsva, asi ichi chigadziriso chichaita kuti mutambo ushande zviri nani uye ruzivo rwevashandisi ruvandudzwe, izvo zvinonyanya kufadza.
Zvimwe zvakawedzerwawo kugadzirisa kana kugadzirisa mifananidzo. Kunyangwe injini yemhando dzinokwikwidza yakagadziridzwa, izvo zvichave zvakangwara uye zvichikwanisa kuchinjisa kukwikwidza zvirinani uye kuve mukwikwidzi akakodzera. Iyo chizvarwa system yakagadzirwazve.
Zvichida kuti vazhinji Vabudisi vashandisi vaive kumirira imwe mhando yekuvandudza. Ivo vakasarudza kunatsiridza izvo zvatovepo kuti zvizoenda zvakanyanyisa kubva nhasi ...
Rumwe ruzivo nezve iyo Inobudirira 0.5.5 chirongwa - GitHub saiti
Kutsigira vanogadzira chirongwa - Ona iyo Patreon saiti
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Kubudirira: mutambo wevhidhiyo une kusunungurwa kutsva uye nhau
OpenSSH 8.7 inouya nekuvandudzwa kweSFTP uye nezvimwe